Hiob 21 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
21 Ɛnna Hiob buae sɛ: 2 “Monyɛ aso ntie m’asɛm yi yiye, Na momma eyi nkyekye mo werɛ. 3 Montɔ mo bo ase mma me na merebɛkasa; Na sɛ mekasa wie a, mo mu biara betumi adi fɛw.+ 4 Me de, onipa na meka me haw kyerɛ no anaa? Sɛ saa a, anka me honhom ho rempere no anaa? 5 Monnan mo ani nhwɛ me, momfa ahodwiriw nhwɛ me, Na momfa mo nsa nto mo ano.+ 6 Sɛ mekae eyi a, ɛhaw me, Na me ho popo nso. 7 Dɛn nti koraa na abɔnefo kɔ so tena ase,+ Wonyin kyɛ, na wonya wɔn ho kɛse?+ 8 Wɔn mma ase tim wɔ wɔn ani so, Na wɔn asefo ase tim wɔ wɔn anim. 9 Wɔn afie mu, asomdwoe nkutoo, na akomatu biara nni hɔ;+ Onyankopɔn abaa nso nni wɔn so. 10 Wɔn anantwinini wo, wɔn ho nsu nsɛe kwa; Wɔn anantwibere wo,+ na wɔmpɔn. 11 Wɔma wɔn mma fi adi sɛ nguankuw, Na wɔn mma huruhuruw. 12 Wɔde mpintin ne asanku bɔ dwom,+ Na abɛn nnyigyei ma wodi ahurusi. 13 Wogye wɔn ani wɔn nkwa nna mu;+ Afei nso wosian kɔ Adamoa* mu afrɛ so. 14 Wɔka kyerɛ nokware Nyankopɔn no sɛ, ‘Fi yɛn nkyɛn kɔ!+ Na yenni anigye biara wɔ w’akwan ho nimdeɛ mu.+ 15 Ade nyinaa so Tumfoɔ no yɛ hena a ɛsɛ sɛ yɛsom no,+ Na sɛ yɛne no di nkitaho a, dɛn na yenya fi mu?’+ 16 Hwɛ! Wɔn yiyeyɛ nni wɔn nsam.+ Me ne nnebɔneyɛfo agyinatu ntam kwan ware.+ 17 Mpɛn ahe na nnebɔneyɛfo kanea dum,+ Na mpɛn ahe na amanehunu to wɔn? Mpɛn ahe na ɔde n’abufuw ba wɔn so bɛsɛe wɔn?+ 18 Wɔte sɛ sare wɔ mframa ano anaa?+ Anaasɛ wɔte sɛ ntɛtɛwa a osuframa huw kɔ? 19 Amanehunu na Onyankopɔn bɛkora so ama ɔdebɔneyɛfo mma;+ Obetua no so ka ma wahu.+ 20 N’aniwa behu ne sɛe, Na ɔbɛnom ade nyinaa so Tumfoɔ no abufuw.+ 21 Dɛn na ɛbɛyɛ no anigye wɔ ne fie, ne kɔ akyi, Bere a wɔatwa n’asram so no?+ 22 Obetumi akyerɛkyerɛ Onyankopɔn,+ Bere a Ɔno na obu atitiriw atɛn no?+ 23 Oyi na obewu wɔ ne yiyedi kɛse mu,+ Bere a n’asom adwo no koraa na ɔte hɔ dwoodwoo no; 24 Bere a n’asrɛ adɔ srade, Na ne nnompe mu hon ayɛ sɔkyee no. 25 Na obi nso de, owu wɔ ne kra awerɛhow mu Bere a onnii nneɛma pa.+ 26 Wɔn nyinaa, dɔte mu na wɔbɛkɔ akɔda,+ Na mmoawa na ɛbɛkata wɔn so.+ 27 Hwɛ! Minim mo adwene nyinaa Ne adwemmɔne a moanya wɔ me ho no.+ 28 Efisɛ mubisa sɛ, ‘Otitiriw fie wɔ he, Na nnebɔneyɛfo ntamadan, wɔn tenabea no wɔ he?’+ 29 Mummisaa wɔn a wɔkɔ kwan so no anaa? Na wɔn nsɛnkyerɛnne nso, monhwɛɛ no yiye? 30 Munhui sɛ ɔbɔnefo fa ne ho di amanehunu da?+ Na wogye no abufuw da? 31 Hena na ɔbɛka ne kwan ho asɛm asi n’anim?+ Na nea wayɛ no, hena na obetua no so ka?+ 32 Ɔno de, ɔdamoa mu na wɔde no bɛkɔ,+ Na wobesi pɛ wɔ ne da so. 33 Subon dɔtetɔw mu bɛyɛ no dɛ,+ Na ɔbɛtwe adesamma nyinaa adi n’akyi,+ Na wɔn a wodii n’anim no dodow nni ano. 34 Hwɛ sɛnea mo awerɛkyekye no yɛ adehunu+ Na mo nsɛm no yɛ nkontompo nko ara!”